Apple dia nijanona tsy nanao sonia ny iOS 6.1.3 sy 6.1.4 | Vaovao IPhone
Mijanona amin'ny sonia ny iOS 6.1.3 sy 6.1.4 i Apple
Vaovao IPad | | iOS 6, iOS 7
Mbola tsy 72 akory akory ny fotoana namoahan'ny Apple ny iOS 7 ary ankehitriny nanidy ny varavarana mankany amin'ny iOS 6.1.3 sy 6.1.4, ny kinova farany an'ny iOS 6. Ka raha mikasa ny hanavao ny iOS 7 ianao hizaha toetra azy dia tadidio fa tsy ho afaka hampihena ny iOS 6 amin'ny fomba rehetra ianao, afa-tsy amin'ny iPhone 4. Manomboka izao, raha mila mamerina na manavao ny fitaovanao ianao, ny hany safidy azo ofisialy dia ny fametrahana ny iOS 7.
Ho an'ireo izay tsy mahalala izay lazaintsika dia tsy maintsy hazavaina izany Apple dia tsy mamela hametraka kinova iOS (firmwares) raha tsy misy "sonia" manao ny tenany izy ireo rehefa manavao na mamerina amin'ny laoniny amin'ny alàlan'ny iTunes. Ary io sonia io dia voafetra hatrany amin'ny kinova farany misy an'ny iOS. Rehefa mivoaka ny kinova vaovao, mandritra ny andro vitsivitsy dia manao sonia ny farany sy ny teo aloha i Apple. Amin'ny fampiharana dia midika izany fa rehefa mampifandray ny iPhone na iPad amin'ny iTunes ianao ary te hanavao na hamerina dia manery anao hanao izany amin'ny kinova farany navoakan'i Apple.
Misy ny mety amin'ny fitaovana taloha, satria manome fahalemena izy ireo ahafahanao mametraka rindrambaiko antitra raha mbola manana ny SHSH ianao, izay ahafahanao mamerina ilay sonia nomerika nataon'i Apple. Fa amin'ireo fitaovana azo havaozina mankany amin'ny iOS 7, iPhone 4 irery sisa no mora tohin'ity fomba ity, ary manantitrantitra aho fa ilaina ny fampiasanao ny SHSH.
Izany tokoa Raha manana ny fitaovanao ao amin'ny iOS 6 miaraka amin'ny Jailbreak ianao, tandremo tsara izay ataonao, satria raha manidy ny fitaovanao ianao ary mila mamerina amin'ny laoniny dia hapetraka ny iOS 7 ary ho very ny Jailbreak ianao, farafaharatsiny mandra-pahatongan'ny Evad3rs mahazo mamorona Jailbreak vaovao ho an'ity kinova iOS vaovao ity. Aleo tadidintsika fa miasa eo izy ireo ary ny fandrosoana voalohany natao dia somary nampanantena, na dia mbola tsy misy daty marim-potoana ahafahana mamita ny fivoarany sy mamoaka izany amin'ny besinimaro.
Fanazavana fanampiny - Hisy ny iOS 7 Jailbreak ho an'ny rehetra
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 6 » Mijanona amin'ny sonia ny iOS 6.1.3 sy 6.1.4 i Apple
aarancon dia hoy izy:
Ity ary no olana (tsy matahotra aho satria efa toy izany hatrany, fa ...)
iOS 7 dia fiovana mahery vaika, fanovana izay ananan'ny tompona iPhone / iPad marobe (esoriko ny iPod satria heveriko fa fitaovana hilalaovana na hihainoana mozika izany ary toa tsy dia zava-dehibe loatra amiko ny famolavolana interface tsara. ), Tianay na halanay akory aza satria mifanohitra amin'izay noresahin'i Apple hatrizay, ny endrika namboarina ho any amin'ny avo indrindra.
Eny, rehefa manana tranomaizina aho raha manana olana manery ahy hamerina ilay iPhone dia afaka mampiasa fitaovana antsoina hoe iLEX RAT Na izany aza, ireo rehetra izay tsy manana fonja dia MANOKANA manomboka izao mba hampakatra ao amin'ny iOS 7 na dia maharikoriko azy aza izany.
Avy eo dia misy ny zava-misy fa rehefa mitondra azy any amin'ny Apple SAT ianao dia fantatrao fa mazava ho azy ireo dia hampakatra ilay fitaovana amin'ny kinova farany an'ny iOS na dia tsy ilaina aza izany ny manamboatra ny lesoka mety anananao.
Raha fintinina, na ho ela na ho haingana dia hanery antsika handray ilay iOS 7 ny Apple vaovao na handao azy ireo. Mihevitra aho fa manana izany mazava. Na dia mbola betsaka aza ny sisa ho an'ity, mieritreritra aho fa ny iPhone 5 sy ny iPad 3 misy ny iOS 6 dia mbola manana fotoana lava sisa, ary amin'izay dia mety hisy olona, ​​karazana Jobs vaovao, hiverina any Apple ary Ny iOS ilay famirapiratana izay nifaneraserako tamin'i Cook dia nesorina.
Mamaly an'i aarancon
hudiny dia hoy izy:
Fanontaniana iray misy an'i Luis zana-drahalahiko manana 4s miaraka amin'ny 5.1.1 ary manana ny 6.1.3. Mety hisy ve ny fanaovan-tsonia sonia 4 na hametahana azy?
Mamaly an'i hudiny
Ny 4S no, ny SHSH ao anatin'io fitaovana io dia tsy misy dikany.
SrPool dia hoy izy:
Salama Luis !!
Te-hametraka fanontaniana aminao aho sao fantatrao ny vahaolana na mahafantatra olona afaka manampy ahy ...
Manana iPhone 4 aho ary manavao amin'ny iOS7 tonga lafatra, manavao azy ho iPhone vaovao ary namerina nanamboatra ny zava-drehetra hatrany am-piandohana (mafy tokoa) ary na dia any aza. Ny olana mahazo ahy dia ny sary, rehefa misafidy lahatahiry sary avy amin'ny solo-saiko tiako hampiasaina amin'ny finday aho dia omeko mba hampifanindriana ary tsy hampifanindrahindra ny lahatahiry izy, mampifanindry sary maro izy fa misy fotoana tonga tapaka ny iTunes ary averina indray ny finday…. Amin'izay tsy ananako zavatra mihoatra ny iray na roa lahatahiry sary vitsivitsy no niraikitra ary manana 12gb maimaim-poana aho…. Ary izany no mba nanontaniako anao raha fantatrao izay vahaolana mety na zavatra mety tsy mety ... .. na olona afaka manoro hevitra ahy .... Tsy manana fivarotana paoma akaikin'ny toerana onenanako aho raha tsy izany dia ho nangataka aho.
Misaotra ny fotoananao,
Valiny amin'i SrPiscina
Heveriko fa manana ny fanavaozana ny iTunes farany indrindra ianao ary ny tariby dia tena marina? Raha izany dia miala tsiny aho fa tsy afaka manampy anao, tsy fantatro izay mety olana.
Eny, mazava ho azy ... iTunes 11.1 sy tariby am-boalohany ... tsara, hijereko izay tsy mety foana ... ary averiko ihany, misaotra anao noho ny fotoananao, vaky ianao ... manaraka anao aho twitter ary vakio ny lahatsoratrao rehetra ... misaotra.
Raha fohy ara-potoana ny fitaovanao, dia mety hahazo fanampiana avy amin'ny Apple ianao.
3 taona farafaharatsiny farafaharatsiny…. Azoko antoka fa resaka hadalana kely io ... andeha hojerentsika raha hitako io ... ary tsy manilika ny fifandraisana amin'izy ireo aho. na izy ireo hilaza amiko ny vahaolana dia ny iPhone 5s hehehe
Tsy very na inona na inona ianao amin'ny fanandramana
Angamba (heveriko ianao) manana sary manana anarana misy tarehintsoratra hafahafa na lava be ianao, maninona ianao no tsy manandrana mampifanaraka ireo sary ao anaty vondrona, mba hahitana raha sary na vondron-tsary niteraka ny olana ?
Heveriko fa tsy izany ... satria manana iPad mitovy sary aho nefa miaraka amin'ny iOS 6.1.3 ary tsy manana an'io olana io aho ... mampifanaraka tsara ireo sary ... fa tsy amin'ny iPhone 4 sy iOS 7 dia mampifanindry ny lahatahiry 2 amin'ny 390 ary avy eo miverina indray. 🙁
Fa ny fotoana roa (ao amin'ny ios 6.1.3 sy ios 7) dia nampifandray azy ireo tamin'ny iTunes 11.1 ve ianao? satria hitako fa ny olana dia ny iTunes vaovao, fa tsy iOS.
Eny, raha ampifanarahiko amin'ny iTunes 11.1 na ny iphone na ny ipad. Amin'ity farany ity dia tsy manana olana aho….
Guvi dia hoy izy:
ampidino ny iTools, mandeha tsara ny fampifanarahana sary, horonan-tsary, hira sns ... tena mora ampiasaina, misafidy ny fanafarana ao amin'ny kiheba sary ianao, mitady ny làlana amin'ny PC-nao ary izay ihany
Valiny tamin'i Guvi
Salama, nohavaoziko tamin'ny iOS 4 ny iPhone 7 (GSM) fa tsy tiako mihintsy io, miadana be ary mihena haingana ny bateria. Misy olona ve afaka manazava amiko ny fomba fampidinana azy amin'ny iOS teo aloha? Efa nanandrana azy aho fa rehefa averiko amin'ny laoniny ny iOS teo aloha avy amin'ny iTunes dia tsy mandeha ny iPhone ary mijanona miaraka amin'ny kisary iTunes sy ny tariby usb ny efijery.
Azafady mba mila fanampiana aho.
Mila manana ny SHSH an'ny iOS 6 ianao mba hahafahany manao izany, manasonia ny firmware amin'ny Redsn0w na iFaith ianao ary mamerina amin'ny alàlan'ny fametrahana ny fitaovana amin'ny maody PwnedDFU.
Bua ... zazavao aho amin'ity, fantatro ny momba ny firmware sy ny redsnow fa tsy misy na inona na inona momba ny SHSH ... Novakiako ihany koa fa tsy mamela anao hisintona ny iOS 6 intsony ny paoma ... tsy afaka nifandray tamin'ny skype na mailaka amin'ny fomba tsara kokoa? Mila fanampiana aho. MISAOTRA
Raha tsy nitahiry ny SHSH mihitsy ianao raha teo amin'ny kinova iOS taloha dia tsy ho afaka hampihena intsony. Nampiasanao fitaovana iray antsoina hoe elo kelikely na azonao atao amin'ny Cydia (fivarotana fampiharana hafa napetraka raha toa ka manana jailbreak amin'ny telefaonao ianao).
ka tsy afaka manao na inona na inona hiverenana amin'ny iOS 6.1.3 intsony aho?
Tsy matahotra aho…
https://www.youtube.com/watch?v=tWW1yBMzHac ary raha manao an'io aho? satria eto hoy izy ireo amiko raha afaka ianao
Tsy mety aminao io fa niasa fotsiny i Apple raha nanao sonia an'io kinova io izy dia tsy mandeha intsony.
okay, misaotra ihany. Nilaza tamiko ny mpikarakara tanana iray fa 10 euro dia azony atao ny misintona izany ho ahy, hanatona azy aho hijery izay azony atao. MISAOTRA
Aloavy aminy izy rehefa nampidina azy ho anao. Raha tsy misy ny SHSH dia tsy azo atao izany.
Hernaldo dia hoy izy:
Salama, mitovy aho, amin'ny iPhone 4 plus shsh 6.1.3, fa amin'ny programa inona no apetrako ny firmware? Esq redsnow dia tsy manaiky ny 6.1.3 namboarina x ifaith
Efa ela aho no tsy nampiasa azy io, fa raha tadidiko tsara dia tsy maintsy ampiasainao ny firmware ofisialy amin'ny redsn0w.
Carlos Luengo Heras dia hoy izy:
Inona no nitranga tamin'ny farany namana? Salama.
Noho izany antony izany, ary Misaotra an'i PEDIA, nanavao aho raha vao nandao ny IOS7, dia nanandrana aho, ary satria tsy tiako izany, ny ampitso maraina dia namerina tamin'ny laoniny aho ary afaka niverina tamim-pifaliana (na dia misy asa sasany aza hahalalako ny fomba hamerina azy) amin'ny malalako IOS6.1.4
Salama manana olana amin'ny iPhone 4 aho, manana ny Shsh an'ny ios 6.1.3 izay ny kinova ios te-hiverina, manana ny ios 6.1.3 tany am-boalohany aho, rehefa te-hamorona sonia manokana amin'ny restn0w mamorona azy io fa rehefa averiko amin'ny iTunes (napetraka taloha niaraka tamin'ny resn0w koa) dia lazainy amiko fa tsy mifanaraka ilay kinova ios ... maninona no azo atao izany? Tsy afaka nanandrana nanao ny sonia manokana aho niaraka tamin'ny ifait satria manana mac HELPAAAA aho
Tsy mandeha amin'ireo fomba amam-panao ireo iTunes vaovao. Tsy maintsy misintona kinova taloha ianao.
Ok, hiezaka ny hisintona ilay iray alohan'ilay ananako amin'ny mac-ko ianao, dia ny 11.1 (126) ... na ny dikanteny inona no arosonao?
Tsy ilay iray, ilay teo aloha.
Mitovy ihany ... "ny iPhone dia tsy azo naverina tamin'ny laoniny, ity fitaovana ity dia tsy mifanaraka amin'ny kinova nangatahina"
Mety ho nahavita nanalavitra ny famerenana amin'ny laoniny ny paoma ve ny paoma? Ny tiako holazaina dia ... tsy ho afaka mivoaka amin'ny iOS 7 intsony isika: /, toa tsy mitovy ny dikan'ilay iTunes anao, nanandrana tamin'ny 10.7 ny 11.0 ny 11.0.4, mitovy aho. ... ny lesoka mitovy amin'izany dia tsy mamela ahy hamerina ...
Tsy misy hevitra ... Miala tsiny aho
Martino dia hoy izy:
Raha ny fahalalako azy dia tsy manao ilay fihenam-bidy amin'ny iTunes ianao, fa amin'ny sasany amin'ireo fitaovana manadio ny Internet ... (Tsy dia miresaka an'io aho), fa amin'izay novakiako dia hifandray mivantana amin'ny iTunes Homena anao sy i Apple foana izany hadisoana izany ... raha tsy tsy mamerina amin'ny iTunes ianao, sa tsy izany?
Valiny tamin'i Martino
Saingy androany dia afaka averina amin'ny laoniny amin'ny iTunes ihany izy io.
Salama, azafady, mila fanampiana aho, te-hanavao ny ipod touch 4g ary tsy nahita hadisoana aho ary niditra amin'ny fomba fanarenana ary izao rehefa te hamerina azy io dia tsy hamela ahy handeha mandritra ny herinandro maromaro ary mila vahaolana aho , milaza amiko ity olana ity (. Tsy afaka niverina ny ipod satria ny mpizara fanavaozana ny lozisialy Ipod dia tsy afaka mifandray na tsy misy amin'izao fotoana izao (andramo aoriana)
Cheo dia hoy izy:
Salama manana olana aho. Manana ny iPhone 3GS-ko aho tsy fantatro izay nanjo azy, tao amin'ny iOS 5.1.1 fa izao tsy fantatro izay nanjo azy ary izao eo amin'ny efijery logo itunes sy ny tariby fa te hamerina aho izany miaraka amin'ny iOS 6.1.3 fa tsy afaka mivoaka error 9 zavatra toa izany heveriko fa tsy tadidiko fa tsy haiko hoe maninona ianao no tsy afaka manampy ahy azafady
Mamaly an'i Cheo
Salama, antenaiko fa misy mamaky an'ity ..
Manana iPhone 4s misy rindrambaiko ios 5.0.1 aho. Notoheriko foana ny fanavaozana azy noho ny tahotra sao hanome ahy olana izany ary toa tsy nilaina koa izany.
Ankehitriny dia mieritreritra ny manavao azy io aho satria isaky ny te hametraka rindranasa iray aho dia mitaky rindrambaiko ambony.
Ny olana dia hanavao ny rindrambaiko ao amin'ny menio fanovana aho ary toa manavao ny iOS 6.1.3 aho.
Te hahafantatra aho raha miasa tsara io rindrambaiko io, na nanana olana kely.
Ary izao rehefa namaky ity lahatsoratra ity aho dia hitako fa tsy maintsy manana "sonian'i Apple" io, mbola manana azy io ve hanavao ny iPhone 4S? MISAOTRA
iTunes 11.1 dia tsy mamela ny fametrahana Custom Firmwares
Manatsara ny fanjifana bateria ao amin'ny iOS 7